Ogaden News Agency (ONA) – Gud. Ku-xigeenka oo khadka teleefoonka uga qaybgalay shirkii jaaliyadda Koonfur Afrka ku qabatay Capetown.
Gud. Ku-xigeenka oo khadka teleefoonka uga qaybgalay shirkii jaaliyadda Koonfur Afrka ku qabatay Capetown.
Posted by ONA Admin	/ January 10, 2012
Jaaliyada S.Ogaadeeniya ee Dalka K/afrika oo ka mid Jaaliyadah Ogaadeeniya kuwa ugu firfircoon ee ka hawl gala dunida dacaladeeda ayaa shalay shir ku qabsatay magaalad Capetown. Shirka oo ahaa mid si fiican loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas’uuliyiinta jaaliyada Ogaadeeniya ee K/Afrika oo ka kala yimid dhamaan gobolad dalka K /Africa.
Shirka Jaaliyada ayuu ajendihiisu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa hawlaha abaabulka jaaliyadda iyo tayada Jaaliyada, laguna wacyi galinayey xubnah maamulka jaaliyadda iyo bulshada Ogaadenya ee ku dhaqan dalka K/afrika ayada oo laga warqabo in ay joogaan dalka K.Afrika boqolaal muwaadiniin Ogaadeeniya u dhashay una badan dhalinyaro la socda heerka uu marayo halgankooda oo ayna wali maskaxdooda ka bixin dhibaataday oga soo carareen dhulkoodii hooyo.
Mas’uuliyiinta jaaliyada ee shirka maanta goob jooga ka ahaa ayaa xubnaha iyo taageereyaasha Jaaliyada kala hadalay siday kor oogu qaadi lahaayeen sanadka cusub hawlaha jaaliyada una dar dargalin lahaayeen qorshaha sanadka cusub iyadoo loo baahan yahay in lala yimaado hormar iyo waxqabada.
Waxay mas’uuliyiintu warbixin ka siiyeen xubnaha waxyaabihii jaaliyada ay qabatay sanadkii la soo dhaafay iyo qorshaha sanadka cusub. Waxaa sidoo kale warbixin laga siiyay jaaliyadda xaalada Ogaadeenya gaar ahaan guulihii uu CWXO sanadkii la soo dhaafay ka soo hooyiyeen dagaaladii cadowga ay iskaga horyimaadeen, iyagoo ka sheegay goobta siday ooga go’antahay naftood-hurayaasha CWXO in ay fuliyaan waajibaadka saran ee ah xoreynta ciida Ogaadeeniya ee sanadaha badan uu gumaysiga soo daashaday.
Iyadoo xubnuhu ay u dhago taagayaan warbixinada mas’uuliyiinta jaaliyada ayaa waxaa khadka telefoonka soo galay Gudoomiye ku xigeenkaJWXO Dr: Maxamed Ismaaciil Cumar oo salaan kadib warbixin siiyey xubnihii jaaliyadda ee shirka fadhiday. Mudane Maxamed Ismaaciil ayaa arimo badan oo halganka quseeya kaga warbixiyay khadka teleefoonka oo gaadhsiiyay jaaliyadda.
Warbixintii kadib ayay waxay xubnuhu waydiiyeen su’aalo ku saabsan xaaladda dalka uu ku sugan yahay iyo halganka gobanimodoonka ah ee JWXO ay hormuudka ka tahay kuwaas oo dhinac walba taabanayey ayuu mudane Maxamad Ismaaciil si fiican ugu qanciyey xubnaha su’aalihii ay waydiiyeen taasoo dadweynaha ay ka maqsuudeen warbixintii uu Gud.ku-xigeenka ka siiyay halganka ka socda gudaha iyo dibadaba .
Intaas kadib gabogabadii shirka waxaa afkaar iyo talooyin is dhaafsaday xubnihii jaaliayda ee goobtaas joogay waxaan lagu kala tagay balantii iyo hawlihii jaaliyada in horey loo sii wado.
Jaaliyadaha Ogaadeeniya ayaa dhamaantood waxay bilabeen qorshayaasha cusub ee sanadkan, iyagoo ku wada hanweyn inay dar dar galiyeen hawlaha halganka ay ka wadaan dibadda oy fuliyaan qorshaha loo dajiyay jaaliyad walba.